Fraport June 2021 Tirooyinka Wadooyinka: Soo kabashada Tirooyinka Rakaabka ayaa sii socota
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Fraport June 2021 Tirooyinka Wadooyinka: Soo kabashada Tirooyinka Rakaabka ayaa sii socota
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Markii ugu horreysay tan iyo markii uu dillaacay masiibada, Madaarka Frankfurt wuxuu mar kale soo dhoweeyay in ka badan 80,000 oo rakaab ah maalin gudaheed, oo la duubay laba maalmood oo kala duwan bishii Juun 2021.
Dardargelinta kororka taraafikada xamuulka ee FRA ayaa sii socotay inkastoo ay yaraatay awoodda caloosha ee sida caadiga ah ay bixiyaan diyaaradaha rakaabka.
Garoomada diyaaradaha ee Fraport Group ee adduunka ayaa sidoo kale diiwaangeliyay kororka taraafikada ee la arki karo Juun 2021.
Bishii Juun 2021, taraafikada rakaabka ayaa sii kabanaysay, in kasta oo ay jirto saamayn joogto ah oo baahsan oo masiibada COVID-19. Madaarka Frankfurt (FRA) u adeegay qaar ka mid ah 1.78 milyan oo rakaab ah bishii warbixinta. Tani waxay ka dhigan tahay koror ku dhow 200 boqolkiiba marka la barbar dhigo Juun 2020. Si kastaba ha ahaatee, tiradani waxay ku saleysan tahay qiime hoose oo hooseeya oo la diiwaan geliyey Juun 2020, markii gaadiidku hoos u dhacay iyada oo ay sare u kaceen heerka caabuqa COVID-19.
Bisha warbixinta, hoos u dhaca heerka dhacdooyinka COVID-19 iyo kor u qaadista xayiraadaha safarka ayaa sii waday inay si togan u saamayso baahida taraafikada. Markii ugu horreysay tan iyo markii uu dillaacay masiibada, Madaarka Frankfurt wuxuu mar kale soo dhoweeyay in ka badan 80,000 oo rakaab ah maalin gudaheed, oo la duubay laba maalmood oo kala duwan bishii Juun 2021.
Marka la barbar dhigo cudurka faafa ee Juun 2019, FRA waxay diiwaangelisay hoos-u-dhac kale oo la dareemi karo oo rakaab ah oo ahaa 73.0 boqolkiiba bishii warbixinta. Intii lagu jiray qeybtii hore ee 2021, FRA waxay u adeegtay ilaa 6.5 milyan oo rakaab ah. Marka la barbar dhigo isla muddadii lixda bilood ahayd ee 2020 iyo 2019, tani waxay ka dhigan tahay hoos u dhac 46.6 boqolkiiba iyo 80.7 boqolkiiba siday u kala horreeyaan.
Isbaanishka Madaarka Ljubljana (LJU) soo dhoweeyey 27,953 rakaab ah bishii warbixinta. Garoomada diyaaradaha ee Brazil ee Fortaleza (FOR) iyo Porto Alegre (POA), wadarta gaadiidku waxay kor u kacday 608,088 rakaab ah. Caasimadda Peru, Madaarka Lima (LIM) ayaa lagu soo dhoweeyey 806,617 rakaab ah bishii Juun 2021.